Motorola Turbo Charger - ဘက်ထရီအတွက်အဖြေ Androidsis
Motorola Turbo Charger ကသင့်စမတ်ဖုန်းကို ၁၅ မိနစ်အတွင်းအားသွင်းပါမည်ဟုကတိပြုသည်
စမတ်ဖုန်းမပေါ်ခင်လေးရက်ငါးရက်တခါငါတို့ဖုန်းကိုအားသွင်းလေ့ရှိတယ်။ ဒါမှမဟုတ်တစ်ပါတ်။ သို့သော်ဖုန်းနှင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောမျိုးဆက်သစ်များတွင်သူတို့၏ထူးခြားသော Achilles ဖနောင့်ရှိသည် ၎င်း၏ဘက်ထရီ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်။ သော်လည်း Motorola ကဖြေရှင်းချက်ကိုရှာတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်။
ယနေ့အချို့ပုံရိပ်တွေ Motorola တာဘိုအားသွင်းစက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြtheနာကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြေရှင်းပေးမည့်ကိရိယာတစ်ခု။ ထို့အပြင် spikes ပါ ၀ င်သောပလပ်စတစ်သေတ္တာသည် ၁၅ မိနစ်အတွင်း ၈ နာရီအားသွင်းနိုင်သည့်ဆိပ်ကမ်းများဆက်တိုက်ထုတ်လုပ်ရန်ကတိပေးသည်။ စမတ်ဖုန်းကိုပွေ့ဖက်ရင်းငိုစရာမလိုဘဲ၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်!
Motorola Turbo Charger သည်သေတ္တာထဲတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအလုပ်လုပ်သည် "Motorola, Apple, Samsung နှင့်အခြားအရာများမှ USB သုံးကိရိယာများ။ " ဆိုလိုတာက စျေးကွက်ထဲရှိမည်သည့်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။။ ကံမကောင်းစွာပဲအဖြေကမဟုတ်ပါဘူး
၎င်းသည် Motorola ထုတ်ကုန်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်ဟုထင်ရသည် Qualcomm မှအမြန်အားသွင်း 2.0 နည်းပညာ, ဥပမာအားဖြင့် Motorola Moto X. တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ သို့သော် Apple စမတ်ဖုန်းများသည်ဤနည်းပညာနှင့်မကိုက်ညီပါက သင် Qualcomm website တွင်စစ်ဆေးနိုင်သည်မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမဆို Motorola Turbo Charger ဖြင့်အားသွင်းနိုင်ပါသလား။
ကောင်းပြီ၊ ငါဒါကိုမငြင်းတော့ပါဘူး ယနေ့တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားသည်ကသင်သည်သဟဇာတမဖြစ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုသင်ချိတ်ဆက်ပါကပေါက်ကွဲလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အားသွင်းနိုင်ပြီးသင့်လျော်သောနာရီများကိုစောင့်ရပါလိမ့်မည်။
Motorola ကိုစောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မယ် သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာတော့အဲဒီအကြောင်းနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သိသည်မှာ၎င်း၏စျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်လာ ၃၅ ဒေါ်လာ၊ ပြောင်းလဲမှုတွင်ထပ်တိုးနှုန်းနှင့် blablabla ၌တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည် 35 ယူရို။
ကျွန်ုပ်၏စမတ်ဖုန်းကို ၁၅ မိနစ်အတွင်း ၃၅ ယူနစ်ဖြင့်ငွေတောင်းပါကမည်သို့နည်း။ ဒါဟာတကယ့်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုပါ။ ၎င်းသည်ဘက်ထရီများ၏ပြtoနာအတွက်အဖြေမဟုတ်သော်လည်းအနည်းဆုံး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများကိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်သော့ကိုရှာဖွေရန်အဆုံးသတ်ရန်အနည်းဆုံး၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Motorola Turbo Charger ကသင့်စမတ်ဖုန်းကို ၁၅ မိနစ်အတွင်းအားသွင်းပါမည်ဟုကတိပြုသည်
Nexus6နဲ့ Samsung Galaxy Note4တို့ဖြစ်ပါတယ်
Nexus6ရေစိုခံနိုင်ပါသလား။